Muqdisho – Page 2 – Geelle Magazine
Home » Muqdisho
Sawirro: Dowladda Soomaaliya oo Hay’adda FAO kala wareegtay diyaarado lagula dagaalamo Ayaxa.
ahmedzaki Posted On May 14, 2020
Masuuliyiinta wasaaradda beeraha iyo Waraabka Soomaaliya ayaa juhdi badan ku bixiyey sidii Soddon sano kadib ay Soomaaliya u heli laheyd diyaaradahaan loogu talo galay in lagu buufiyo Ayaxa si loo soo afjaro dhibaatada uu ku haya beeraleyda Soomaaliyeed, iyadoo ay […]
Dowladda Somaaliya oo qaadaysa talaabo horleh oo looga hortagayo Covid19.
Wasaaradda caafimaadka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa xaqiijisay in 24-kii saac ee lasoo dhaafay dalka laga diiwaan geliyay 49 xaaladood oo COVID-19 ah, 4 bukaanna ay ka boqsoodeen xanuunka. Wasiirka Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Marwo Fowziya Abiikar Nuur oo sidoo kale caddeysay […]
Dowladda Somaaliya oo sheegay in dileen Saraakiil katirsan Al-shabaab.
ahmedzaki Posted On May 11, 2020
Ciidamada Kumandoska Somaaliya ee Danab ayaa sheegay iney weerareen degaanka Carabow oo 50-km u jira degmada Bu’aale ee gobolka Jubbada dhexe halkaasoo ay ku sugnaayeen kooxda Al-shabaab. Saraakiisha ciidamada Xoogga dalka ayaa intaas ku daray in xiliga ay weerarka qaadayeen […]
RW khayre oo Shir gudoomiyay Kulan looga hadlay Gurmadka Qardho.
Ra’iisul Wasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa guddoomiyay kulan looga hadlayay isku dubaridka u gurmashada Qardho oo dhawaan ka dhaceen fatahaado xoogan oo sameeyay in ku dhow 48 kun oo qof. Kulanka waxaa kaqayb galay safiirrada dalalka […]
Haweenay u afduubnayd Al-shabaab oo xoog looga siidayay.
Silvia Constanca Romano, oo ah haweeney samafalka ka shaqeysa, ayaa ku laabatay magaalada Roma, kadib markii laga sii daysay Maleeshiyada Al-Shabaab oo in ka badan sanad iyo bar afduub ugu haysatay Soomaaliya. Silvia, oo kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya ay kasoo […]
Sare u kac dhimasho oo laga soo sheegayo Muqdisho
Waxaa sare u kac xooggan laga soo sheegaya tirada dadka uu ku dhacay iyo kuwa u dhintay Cudurka Covid 19 ee Soomaaliya. Tiradii ugu dambeysay ee Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya shaacisey ayaa ahayd 835 kiis, taasoo laba laab ka badan halkii […]
Kheyre oo baaq u diray Maamul Goboleedyada dalka
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa guddoomiyey Shirka joogtada ah ee Guddiga Qaran ee ka hortagga Cudurka Covid 10 oo kiisas fara badan laga helay gudaha Soomaaliya. Inta uu socday kulanka Guddiga Qaran ee […]
Laamaha Amniga oo Gacanta ku dhigay Nin Bam Gacmeed Tuuray
Ciidamo ka tirsan kuwa Amniga ee Maamulka Degmada Yaaqshiid ee Gobolka Banaadir ayaa xalay gacanta ku dhigay Nin Bam Gacmeed ku tuuray Laanta Suuq Bacaad ee degmadaas. Dad goobjoogayaal ah ayaa waxa ay sheegeen in falkaas Bam Gacmeedka ahaa uu […]
Taliska Booliska Soomaaliyeed oo afhayeen yeelanaya
Taliyaha Ciidanka Boliiska Soomaaliyeed Cabdi Xasan Maxamed (Xijaar) ayaa Afhayeenka Ciidanka Booliska u magacaabay Dhame Sadiiq Adan Cali (Duudishe) oo ah Sarkaal Dhallinyaro ah. War-Saxaafadeed kasoo baxay Taliyaha Booliska ayaa lagu sheegay in Sarkaalka uu kusoo biiray Ciidanka sanadkii 2007-dii, […]